talen'ny DSNGR tamin’ity herinandro ity mba hampahafantarana ny vaovao farany mahakasika ny fivoaran'ny fanisana ny basy manerana an'i Madagasikara. Raha ny ezaka dia azo tsapain-tanana satria tao anatin'ny telo andro monja izay dia 300 isa ny basy voaray ao anaty "base de recensement" Mbola manentana hatrany ny ao amin'ity rantsa-mangaika ny Tafika ity mba "𝗛𝗶𝗮𝗿𝗮-𝗺𝗶𝗿𝗼𝗻𝗮 𝗮𝗺𝗶𝗻'𝗻𝘆 𝗮𝗿𝗮-𝗱𝗮𝗹à𝗻𝗮" ny rehetra. Izany no teny faneva amin'ity asa fanisana basy sy fanomezan-dalana mahakasika ny fitanana basy. Mipariaka izay tsy izy mantsy tato ato ny fitaovam-piadiana ary Malagasy maro no maty ankoatra ireo teratany vahiny maty tamin’ny kidnapping sy ny fanafihana mitam-piadiana. Mihevitra ny mpanara-baovao fa na misy aza ny fampidirana basy an-tsokosoko dia tsy afa-miala ny mpitandro filaminana. Voalazan’ny manamboninahitra iray moa fa porofo mitohaka tamin’ny tendany ny basy iray kaontenera izay tratra teny Iavoloha tamin’ny fitondrana tany aloha tany.